Indlu encane egqumeni lase-Gibloux Fribourg - I-Airbnb
Indlu encane egqumeni lase-Gibloux Fribourg
Le Châtelard, Fribourg, i-Switzerland
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Latifa
Ipulazi elidala elilungisiwe, igumbi lokuphumula, ikamelo lokulala, indlu yokugezela yangasese nendawo yokungcebeleka. Eduze kwamasayithi ezivakashi nezemidlalo. A 15 imiz autoroute A12 et de la gare de Romont.
Ipulazi lakudala elilungisiwe, igumbi lokuphumula, ikamelo lokulala, igumbi lokugezela langasese nendawo yokungcebeleka. Eduze namasayithi ezivakashi nezemidlalo. 15 imiz A12
motorway nesiteshi se-Romont. Ngaphambilini indlu yasemapulazini elungisiwe, igumbi lokuphumula, ikamelo lokulala, igumbi lokugezela langasese nendawo yokuzijabulisa. Eduze namasayithi ezivakashi nezemidlalo; imizuzu engu-15 i-A12 Highway ne-Rumont Station
Ifinyeleleka kubantu abanokuhamba okuncishisiwe, unekamelo lokuphumula elifudumele negumbi lokulala elinamathuba okuhlalisa abantu abangu-3, umbhede wezinsana owodwa kanye negumbi lokugezela elinamathawula, amashidi, umshini wokomisa izinwele nesiqandisi esincane kanye nomshini wekhofi, iketela.
Ukupaka, i-Wi fi mahhala kanye Nentela Yezokuvakasha kufakiwe.
Futhi unokufinyelela endaweni yokungcebeleka enendawo yokubhukuda efudunyeziwe kusukela ngo-May* kuya ku-September *, i-BBQ, umgodi womlilo, itafula le-ping pong, imidlalo ye-DART nenkundla ye-pétanque. Amathuba okubeka amabhayisikili akho ngaphansi kwesembozo.
Ikhishi elinakho konke kanye nombhoshongo wokuwasha otholakalayo ngokwezidingo ezithile nesivumelwano esivamile.
Ifinyeleleka kubantu abanokuhamba okuncishisiwe, unekamelo lokuphumula elifudumele kanye negumbi elinamathuba okuhlala abantu abangu-3, indlwana eyi-1 kanye negumbi lokugezela elinamathawula, amashidi, umshini wokomisa izinwele kanye nefriji encane ngakho umshini unekhofi, iketela. Ukupaka, i-Wi fi Free kanye Nentela Yokuhlala kufakiwe. Futhi unokufinyelela endaweni yokungcebeleka enendawo yokubhukuda enamanzi ashisayo kusukela ngo-May kuya ku-September, i-BBQ, i-Brazier, itafula le-ping-pong, ama-darts kanye ne-alley ye-bowling. Ungabeka amabhayisikili akho ngaphansi kwesembozo. Ikhishi elinakho konke kanye nombhoshongo wokuwasha otholakalayo ngokwezidingo ezithile nesivumelwano esivamile.
Ifinyeleleka kubantu abakhubazekile, unendawo yangasese egumbini lokuphumula elifudumele, ikamelo elinendawo yokuhlala yabantu abangu-3, umbhede wosana, kanye negumbi lokugezela elinamathawula, amashidi ombhede, umshini wokomisa izinwele, ifriji encane ngisho nomshini wekhofi, iketela. Ukupaka kwamahhala kuyatholakala futhi ungangena endaweni yokuzijabulisa enendawo yokubhukuda efudunyeziwe kusukela ngo-May kuya ku-September, izindawo zokosa inyama, i-barbecue, i- barazir, itafula le-ping-pong, imicibisholo kanye ne-alley ye-bowling. Ungabeka amabhayisikili akho ngaphansi kwe-hood. Ikhishi elinakho konke kanye nombhoshongo wokuwasha uyatholakala ngokwezidingo ezithile nesivumelwano esivamile
ubusuku obungu-7 e- Le Châtelard
Kubathandi bemvelo, le ndawo yokuhlala ethulile nezolile iyakwamukela kalula, enkabeni yezinto ozithandayo kungakhathaliseki ukuthi ezemidlalo, ukuphumula, isiko, ukuthola noma uchwepheshe. I-Gruyère idolobhana elikhulu eliphakathi nendawo eliseduze thola ukwenziwa kwe-Gruyère AOP kanye ne-Vachin Friborgeois PDO edumile, isici esiyinhloko se-Fribourg Fribourg half fondue, ukhilimu ophindwe kabili we-Gruyère owenza ama-meringues amahle kakhulu. Ukuze uthole ukudla okuconsisa amathe vakashela imboni yoshokoledi edumile e-Broc. E-Moléson Alt Alt Alt Alt.m. Ungabona indlu yakho * chte don * ingasetshenziswa unyaka wonke.
Hlola ezinye izinketho ezise- Le Châtelard namaphethelo